ဘာလို့ကြိုးစားသလောက်မအောင်မြင်နိုင်ဖြစ်နေရတာလဲ – Live the Dream
ဒါကိုလူတော်တော်များများ ပြောဖူးကြမှာပါ “ငါဒီလောက်ကြိုးစားရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့မအောင်မြင်တာလဲ” ကိုယ်ကြိုးစားခဲ့သလောက် မဖြစ်မြောက်တဲ့အခါ လူတွေကဒီအချက်နဲ့ပက်သက်ပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်လာတတ်ကြတယ်။ ?
လူတိုင်းကတော့ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုရချင်ကြသူတွေချည်းပါပဲ။ ဟုတ်တာပေါ့ ဘဝမှာ မအောင်မြင်ချင်တဲ့သူ ဘယ်သူရှိပါ့မလဲ။ လူတိုင်းလိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့ ကြိုးစားမှုက အဓိကဆိုတာ အားလုံးလက်ခံထားကြပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့်ကြိုးစားတိုင်း အောင်မြင်လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
ဒါဆိုဘာကြောင့်လဲ??? ဘာလို့ကြိုးစားပေမယ့် မအောင်မြင်ရတာလဲ???
ဒီလိုအခြေအနေကြုံနေရပြီဆိုရင်တော့ အောက်ကအချက်လေး(၂)ချက်ကို သေချာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုနေပါပြီ ⬇️⬇️
ပထမအချက်ကတော့ မှန်ကန်တိကျတဲ့ပန်းတိုင် မရှိလို့ပါ။
အခုခေတ်မှာ လူငယ်တော်တော်များများက ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို အတိအကျမသိပဲ လမ်းပျောက်နေတတ်ကြပါတယ်။ လူငယ်ဆိုတာကလည်း ဖြစ်ချင်တာတွေကများ ဝါသနာတွေကများနဲ့ ဒီတစ်ခုပဲ လုပ်ရမလိုလို၊ ဟိုတစ်ခုပဲ လုပ်ရမလိုလို မသေမချာဖြစ်တတ်ကြသူတွေလေ။ အဲလိုမျိူး မရေမရာနဲ့ အကုန်လုံးလုပ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ဘာမှမရလိုက်ပဲ ကျန်နေခဲ့တတ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် သင်ကဘောလုံးအသင်းဝင်တော့မယ် ဆိုပါစို့။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်က သင့်ဘောလုံးအသင်းမှာ အတော်ဆုံးကစားသမားဖြစ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံကျော်ဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဝိတ်ကျချင်လို့ ဘောလုံးအသင်းထဲဝင်တယ်ဆိုတာကတော့ မဟုတ်သေးပါဘူးနော်။ ဘာလို့ဆို ဘောလုံးအသင်းတွေက ဝိတ်ချပေးဖို့မှမဟုတ်တာပဲလေ။ ဒါ့ကြောင့်ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာက ဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့ တိကျတဲ့ပန်းတိုင်ရှိဖို့လိုပါတယ်နော်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ ကိုယ်သွားနေတာ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်း ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ သေချာပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရပါမယ်။
အပေါ်ကဥပမာလိုပဲပေါ့ ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်ရင် ဘောလုံးအသင်းကိုဝင် လေ့ကျင့်ရမယ်၊ ဝိတ်ကျချင်ရင်တော့ GYM ဆော့ရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံးကိုလည်းကြိုက်လို့ ဝိတ်ထိန်းရင်းဘောလုံးလည်းကန်ချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဘာညာဘာညာတွေကတော့ ကိုယ့်အပိုင်းပေါ့နော်။ တကယ်ဝိတ်ပဲကျချင်တာပါဆိုရင်တော့ ဘောလုံးအသင်းမဟုတ်ပဲ GYM ကိုပဲပြေးရမှာပါ ဒါမှလည်း ဝိတ်ကျမှာကိုး။ အဲ့တော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာသိပြီးပြီဆိုရင် လမ်းကြောင်းမှန်မှန်သွားရမယ်နော်။
ကဲ ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ အဖြေလေးတွေ ရှာတွေ့သွားကြပြီလား။ တကယ့်တော့ရိုးရိုးလေးပါနော်။ အားလုံးပဲ ဒီနှစ်ချက်လေးကိုကျင့်သုံးရင်းနဲ့ ပိုပြီးအောင်မြင်သူတွေဖြစ်လာနိုင်ကြပါစေနော်။